आज बिहीबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात ! « Sansar News
आज बिहीबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०६:४२
अस्वस्थता र कमजोरी अनुभूति हुनेछ। परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा काममा समय लाग्नेछ। चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला। आकस्मिक खर्च बढ्नेछ, अर्थअभाव हुन नदिन समयमा सजग रहनुहोला। सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। तर समयमा समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्।
अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता अलि दुःख पाइनेछ। अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। परिस्थितिवश आँटेको काममा बाधा हुन सक्छ। हल्लाको पछि लाग्दा दुःख पाइनेछ। प्रतीक्षित नतिजा उत्साहप्रद नहुन सक्छ। नयाँ काम थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला।
२०७९ जेठ १२ गते, बिहीवार, (२६ मे २०२२)
आज जेठ ११ गते बुधबार, हेर्नुहोस् राशिफल आज क–कसलाई छ त फाइदा ?